I-Elfsight Apps: Urhwebo oluzinziseka ngokulula, iFomu, uMxholo, kunye neeWidgets zeNtlalo kwiWebhusayithi yakho | Martech Zone
Ukuba usebenza kwi ethandwayo iqonga lolawulo lomxholo, uya kufumana ukhetho olukhulu lwezixhobo kunye namawijethi anokongezwa ngokulula ukuphucula indawo yakho. Ayizizo zonke iqonga ezinokhetho, nangona kunjalo, ihlala ifuna uphuhliso lomntu wesithathu ukudibanisa iimpawu okanye amaqonga onqwenela ukuwaphumeza.
Umzekelo omnye, mva nje, ibikukuba besifuna ukudibanisa uPhononongo lukaGoogle lwamva nje kwindawo yomthengi ngaphandle kokuphuhlisa isisombululo okanye ubhalisele iqonga lokuphonononga lonke. Sifuna nje ukushumeka iwijethi ebonisa uphononongo. Ngombulelo, kukho isisombululo saloo nto- iiwijethi ze-Elfsight zinceda ngaphezulu kwesigidi seesayithi ukwandisa ukuthengisa, ukubandakanya abatyeleli, ukuqokelela iinkokeli, kunye nokunye. Into emnandi ngezi widgets kukuba ayifuni nakuphi na ukukhowuda… kwaye unokuqalisa simahla!
Ukujonga inengqokelela engaphezulu kwe-80 yee-apps ezinamandla ezifumanekayo kubasebenzisi, kubandakanywa iwijethi zemidiya yoluntu, iiwijethi zokuphonononga, iiwijethi ze-ecommerce, iiwijethi zengxoxo, iiwijethi zefom, iiwijethi zevidiyo, iiwijethi zeaudio, iiwijethi zemephu, iwijethi yegalari yezithombe, isilayidi sewijethi, iwijethi ye-PDF embed, imenyu. iiwijethi, iiwijethi zekhowudi yeQR, iiwijethi zemozulu, iiwijethi zokukhangela ... kunye nokunye okuninzi. Nazi ezimbalwa zeewijethi zabo ezidumileyo.
Age Verification Widget -Ukuba ufuna ukuqinisekisa ubudala bomsebenzisi kwaye uvule ukufikelela kwindawo yakho kuphela ukuba baneminyaka epheleleyo, zama ukwenza ngokwezifiso Elfsight Age Verification widget. Khetha itemplate efanelekileyo okanye uzenzele eyakho ukusuka ekuqaleni, seta umda weminyaka yohlobo lwakho lweemveliso zeenkonzo, khetha enye yeendlela ezintathu zokuqinisekisa, yongeza isicatshulwa somyalezo, kwaye uthathe imeko yabasebenzisi abangaphantsi kweminyaka.
Zonke-in-One Chat Widget -Sebenzisa indlela elula nesebenzayo yokuhlala unxibelelana nabasebenzisi bakho kuFacebook Messenger, WhatsApp, Telegraph, okanye iViber ngqo kwiwebhusayithi. Imizuzu nje embalwa yokwenza ngokwezifiso kwaye ufake iwijethi.
Zonke-kwi-One Review Widget -Kukho amaxesha apho awufuni qonga lolawulo lophononongo… ufuna nje ukubethelela iwijethi kwindawo yakho kunye nezimvo zabathengi ezinamagama abasebenzisi, imifanekiso yeprofayile, kunye nokuhanjiswa kwiphepha lakho kuyo nayiphi na indawo yophononongo lweshishini kwangoko. abathengi abaphambili. I-Elfsight ibonelela ngezixhobo ezingama-20+ ezifana neGoogle, Facebook, Amazon, eBay, Google Play Store, Booking.com, AliExpress, Airbnb, G2Crowd, Yelp, Etsy, OpenTable, nezinye ezininzi. Yindlela esebenzayo yokuqinisekisa ukuthembeka kwebhrendi yakho! Nanku umzekelo omhle ovela ku ikontraka yokufulela sisebenza kunye:
Countdown Timer Widget -Yenza ixesha elivelisa intengiso kwiwebhusayithi yakho I-Elfsight Countdown Timer. Fudumeza umoya kwaye wenze imvakalelo yokunqongophala kwezinto zakho, ubonisa indlela ezithengiswa ngayo phambi kwamehlo abathengi. Yandisa ungxamiseko lokuthenga ngexesha elithe kratya ukuya kutsho ekupheleni kwexesha lonikezelo olulodwa. Tsalela ingqalelo kwiziganeko zakho ezizayo kwaye ugcine abaphulaphuli bakho belindele ngolangazelelo isiqalo ngesibali-xesha sokubala.
Iwijethi yeKhalenda yoMsitho -iwijethi ekuvumela ukuba wabelane ngokulula ngemisebenzi yakho nehlabathi liphela. Iqulethe amathuba amahle okubonisa iziganeko ezizayo ngeyona ndlela imele. Yenze ibe yeyakho ukudibanisa uyilo kunye nesimbo sewebhusayithi yakho. Yenza izixa ezininzi zemisitho, yongeza iithegi, layisha eyakho imifanekiso kunye neevidiyo, kwaye ugcine abasebenzisi benolwazi malunga ne-ajenda yakho.
Facebook Feed Widget -Ikuvumela ukuba ubonise umxholo kwiphepha elilawulwayo likaFacebook, apho unofikelelo lolawulo. Ukuba uqhuba iphepha leshishini kwi-Facebook unokulidibanisa ngokulula kwiwebhusayithi yakho. Wonke umxholo owongezayo kwiphepha lakho leendaba zentlalo uya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwiwebhusayithi yakho.
IWidget yoMakhi weFom -ekuphela kwento oyifunayo ukuba ube nazo zonke iintlobo zokuzalisa iifom kwindawo yakho. Sinikezela ngesixhobo sendalo yonke esinakho konke ukuvumela ukuba wenze uluhlu olubanzi lweefom zokuqokelela idatha kubaxhasi bakho. Qhagamshelana, ifom yeNgxelo, uPhando, ifom yokuBhukisha - naluphi na uhlobo olufunayo, qiniseka ukuba ixhaswa yi-app yethu kwaye ithatha imizuzwana ukuyilungisa.
Iwijethi yoHlolo lukaGoogle -Yandisa uluhlu lwabaphulaphuli lophononongo lweshishini lakho kwaye ulipapashe kwiwebhusayithi yakho. Iwijethi yethu iya kukunceda ubonise uphononongo lwakho oluneenkcukacha ngegama lombhali, umfanekiso, kunye nekhonkco kwiakhawunti yakho kaGoogle ukuze ufumane uphononongo olutsha. Leyo yindlela esebenzayo yokungqina ukuthembeka kophawu lwakho! Ungahlela uphononongo ukubonisa kuphela ezona zibalaseleyo, utshintshe useto lweteksti, uphononongo lokubonisa, kunye nokunye. Iwebhusayithi yakho iya kuhlaziya ngokuzenzekelayo ngophononongo olutsha njengoko lupapashwa. Yakha iwijethi ye-Elfsight simahla.
Instagram Feed Widget -bonisa iifoto ezivela kwi-Instagram ngazo zonke iindlela ezikhoyo-ii-hashtag, ii-URL, okanye amagama omsebenzisi, kunye nayiphi na indibaniselwano yezo. Kulula kakhulu ukugcwalisa ifidi yakho! Kolona khetho lunenkathalo yomxholo, ungasebenzisa iindidi ezimbini zezihluzi zesondlo - ngaphandle kwemithombo kunye nokubonisa kuphela kwezimbalwa.
Iwijethi yeBhodi yeMisebenzi -iwijethi yewebhusayithi ekuvumela ukuba uveze izithuba ezivulekileyo kwaye ufumane iiCV kubaviwa kanye kwindawo yakho ngeyona ndlela ifikelelekayo. Ngewijethi yethu entsha, uya kukwazi ukuxela inkampani yakho, upapashe ulwazi malunga nokuvuleka kwemisebenzi kwaye uqalise kwakhona. Iwijethi ikuvumela ukuba wenze ikhadi lomsebenzi kunye nomfanekiso ochanekileyo kunye neqhosha elithi Faka isicelo. Ukuqeshwa kweBhodi yeMisebenzi ye-Elfsight ikuvumela ukuba ulungelelanise inkqubo yokugaya kwaye ufumane iimpendulo zokuvuleka kwemisebenzi ngonqakrazo olunye.
I-Widget ye-Logo Showcase -bonisa onke amahlakani okanye iilogo zabaxhasi okanye ukhankanyiwe kumaphephandaba kwiwebhusayithi yakho. Ngoncedo lwewijethi, uya kubonisa ukuba ungumlingane othembekileyo kwaye wenze umfanekiso omhle wenkampani yakho. Iwijethi ikuvumela ukuba ungeze nasiphi na isixa seelogo, uzibonise kwisilayidi okanye kwigridi, kwaye utshintshe ubungakanani beelogo. Unokongeza iintloko kunye namakhonkco kwiiwebhusayithi zeenkampani. Ngoncedo lwemibala kunye neenketho zeefonti, uya kukwazi ukwenza inkangeleko ekhethekileyo.
Popup Widget -Naluphi na uhlobo lwepopup ongathanda ukuba nayo kwindawo yakho - ungayakha usebenzisa i-Elfsight Popup. Yazisa intengiso kunye nezibonelelo ezikhethekileyo, qokelela ababhalisile kunye nengxelo, vuselela iinqwelo ezishiyiweyo, bonisa ii-pop-ups ezifudumeleyo ezamkelwayo, ukwazisa ngokusungulwa okuzayo… Fumana nantoni na oyifunayo!
Pinterest Feed Widget -bonisa iprofayile yakho, kunye naziphi na izikhonkwane kunye neebhodi ezivela kwiPinterest kwiwebhusayithi yakho. Ngesixhobo sethu, khetha naziphi na iibhodi kunye nezikhonkwane kwaye wenze ingqokelela yemifanekiso kwindawo yakho. Bonisa iiphothifoliyo zakho, ukhuthaze abathengi bakho ukuba bafumane izinto ezintsha okanye ubone nje umxholo wewebhusayithi yakho. Ukutya okunokwenziwa ngokwezifiso kwePinterest kuya kukunceda ukuba wandise ukufikelela kumxholo wakho, ukonyusa ukubandakanyeka kwabatyeleli bewebhusayithi kwaye uzise abalandeli abaninzi kwiPinterest.
Itheyibhile yexabiso Widget - Bonisa unikezelo lwakho ngokweenkcukacha kwaye Kuya kunceda iindwendwe zakho zewebhusayithi zibone ngokukhawuleza kwaye zithelekise iimpawu ezahlukeneyo ezinikezelwa yizicwangciso zakho zamaxabiso. Sebenzisa ukwenziwa ngokwezifiso okuphezulu ukunika amaxabiso akho elona mbonakalo ilungileyo-lenze lidityaniswe nomxholo wewebhusayithi yakho, okanye eliqaqambileyo nelinomtsalane. Yenza abathengi bakho benze kwaye banyuse inguquko!
Indawo yokutyela Widget yeMenu -Iwijethi esebenziseka lula yokubonisa indawo yakho yokutyela okanye imenyu yecafe kanye kwiwebhusayithi yakho. Yeyona ndlela ilungileyo yokwazisa iindwendwe zakho malunga nezinto zakho ezikhethekileyo, bonisa i-concept eyodwa kwaye uyibonise ngemifanekiso yokutya enomtsalane. Ingasebenza njengesixhobo esilula ukufezekisa nomsebenzi ocela umngeni: ungabonisa naliphi na inani leemenyu ezinenani elikhulu lezinto. Okanye bonisa nje uluhlu olufutshane lweengcali ozisebenzelayo. Zive ukhululekile ukukhetha ukukhanya, iskimu esimnyama okanye wenze ngokwezifiso yonke into oyithandayo, ukupeyinta yonke imibala ye-accent. Elona thuba likhulu lewijethi kukuhlala usexesheni: ungatshintsha amaxabiso, uluhlu lwezinto, yongeza izitya ezitsha okanye iimenyu ngokucofa nje okukodwa! Azisekho iifayile zePDF kunye neemenyu onokuthi uzibhale kwakhona kwasekuqaleni. Qala nje ukwenza imenyu yakho emangalisayo ngoku kwaye ubukele inani lakho elihlala likhula lokubhukisha kunye neendwendwe.
Social Feed Widget -Yenza ukutya okumangalisayo kweNtlalo ngokudityaniswa okungenamkhawulo kwemithombo emininzi: i-Instagram, i-Facebook, i-YouTube, i-TikTok, i-Twitter, i-Pinterest, i-Tumblr, i-RSS (iyeza kungekudala-i-LinkedIn kunye nokunye). Thatha okona kulungileyo kumava abonakalayo ngemifanekiso ye-Instagram kunye neevidiyo zeYouTube. Okanye unokwenza isondlo seendaba ngqo kwizithuba zakho zikaFacebook neTwitter. Jabulela uhlengahlengiso lwemithombo eguquguqukayo ukuze ubonise iintlobo ezithile zomxholo, inethiwekhi yentlalo nganye ixhasa. Faka uluhlu lwezihluzo ezichanekileyo ukwenza ukutya kwakho okanye ukusebenzisa imowudi yomodareyitha ngesandla.
Testimonial Slider Widget -Ukubonisa impendulo yokwenyani yabathengi abanamava akhuthazayo abatyeleli ukuba babe namava afanayo kwaye kunika iimveliso okanye iinkonzo zakho ubungqina bentlalontle. Yenza ubungqina bomthengi wakho ingxabano ephumelelayo ngokubonisa kanye apho isigqibo sokuthenga senziwe kwaye ubone indlela abayandisa ngayo intengiso yakho.
Joyina ngaphezulu kwesigidi esinye sabasebenzisi abasebenzisa i-Elfsight Apps kwaye wenze iwijethi yakho yokuqala ngoku:
Yenza iWidget yakho yokuqala yokubona i-Elfsight
Ukubhengezwa: Ndililungu le Ukujonga kwaye ndisebenzisa ikhonkco lam kulo lonke eli nqaku.
tags: Iwijethi yokuqinisekisa ubudalaiwijethi yekhalendaincoko widgetIwijethi yesibali-xesha sokubalawidget countdownukubona ngamehloiwijethi yekhalenda yomsithoiwijethi yomsithoiwijethi ye-facebookyenza iwijethiiwijethi yophononongo lukaGoogleInstagram Widgetwidget yokuvula umsebenziwidget yomsebenzilogo showcase widgetlogo widgetPinterest feed widgetPinterest widgetpopup widgetitafile yamaxabisoiwijethi yetafile yamaxabisoImenyu yokutyelaiwijethi yemenyu yokutyelaiwijethi yophononongorss widgetukutya kwezentlaloiwijethi yobungqinaiwijethi yetiktokIwijethi yeTumblrIwijethi ye-twitterwidgetiwijethi ye-youtube
I-Appointiv: Ukulungelelanisa kunye nokuSebenzisa ukuCwangciswa kokuQeshwa usebenzisa i-Salesforce